Ememme nganga Septemba na -achị na Malta, ihe dị oke ọnụ ahịa nke Mediterranean
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Ememme nganga Septemba na -achị na Malta, ihe dị oke ọnụ ahịa nke Mediterranean
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • LGBTQ • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Nlele Grand Harbor, Valletta, naanị otu ebe ị ga -eleta n'oge ememme Malta Pride
Malta, otu agwaetiti dị na Mediterenian, bụ ebe zuru oke iji gaa n'ihu na-eme ememme Nganga na Septemba 10-19, mgbe ngwụcha US mechara na June. ILGA-Europe họọrọ Malta #1 na listi egwurugwu EU maka afọ nke isii n'ahịrị ma bụrụ otu n'ime ebe njem LGBTQ+ kacha elu n'ụwa. Malta enwetala akara 6% maka ikike mmadụ LGBTQI.
Malta bụ otu n'ime ebe njem LGBTQ+ kachasị elu n'ụwa.
Ndị ọbịa nwere ike mee ememme izu ike Malta site na Septemba 10-19, 2021, nke gụnyere Malta Pride March na egwu na Septemba 18, 2021.
Malta na-ezube ọtụtụ mmemme ga-atọ ụtọ n'oge ememme otu izu ha na-eme ka ahụmịhe echefu echefu maka ndị ọbịa LGBTQ+ niile.
Malta Pride Week bụ nnukwu ohere maka ndị njem LGBTQ+ inyocha agwaetiti nwanne nwanyị atọ, Malta, Gozo, na Comino mgbe ha na -eme ememme nganga na njem njem amara maka afọ 7000 nke akụkọ ntolite ya, nri nri nri gụnyere ụlọ nri kpakpando 5 Michelin, nnukwu osimiri na ndụ abalị. Malta na-ezube ọtụtụ mmemme ga-atọ ụtọ n'oge ememme otu izu ha na-eme ka ahụmịhe echefu echefu maka ndị ọbịa LGBTQ+ niile.
Luzzu, ụgbọ mmiri azụ na Malta na Marsaxlokk
Izu Malta Nganga nwere izu nke juputara na mmemme na ụdị ọ bụla gụnyere ejiji, nka, ihe nkiri na egwu.
MGBE- ngosi ihe ngosi nka - Septemba 10
POP site na Lollipop - Septemba 11 & 17
Ngosipụta Ihe Atụ - Septemba 12
Ụbọchị mpako osimiri - Septemba 12
Ihe ngosi LGBTQI nka na ihe ngosi - Septemba 12 - 18
Nzukọ na Maori - Septemba 12
Mkparịta ụka obodo - Septemba 14-17
Nganga mepere igwe abalị - Septemba 15
Mixology ehihie na abalị - Septemba 15
Ọgbakọ ndị ruuru mmadụ - Septemba 16
Nchọpụta kwa ọnwa na ụlọ ọrụ chọkọletị Malta - Septemba 16
Ihe nlere ihe nkiri - Septemba 16
David Bowie mgbede mmekọrịta - Septemba 17
Ịkpakọ Mmadụ Nganga - Septemba 17
#Ị ga -agụnyere egwu egwu egwu Malta - Septemba 18
Mgbe Ememe - Septemba 18
Nyocha akwụkwọ nyocha: Nganga bụ ngagharị iwe - Septemba 19
Ndị America gbara ọgwụ mgbochi ọrịa Nabata na Malta - ga -ejiriri ngwa VeriFLY
Ndị njem si US ruo Malta ga-enwe ohere inyocha ịdị mma ha wee nye akwụkwọ ndị ọzọ, dị ka ndị ikike Maltese chọrọ, site na ngwa VeriFLY nke na-enyere aka ịgbasa ọgwụ mgbochi COVID-19, nkwado akwụkwọ, na igosipụta nsonaazụ doro anya. , omume enyi na-agụ ihe. Mgbe ha mepụtara profaịlụ echekwara na ekwentị mkpanaka ha, ndị njem ga -ebugo ozi ọgwụ mgbochi yana akwụkwọ ndị ọzọ dịka achọrọ ozugbo na ngwa VeriFLY. Ngwa VeriFLY ga -enyocha na ozi onye njem ahụ dabara na ihe Malta setịpụrụ wee gosipụta ozi dị mfe ma ọ bụ ọdịda. Mgbe nke ahụ gasị, a ga -eduzi onye njem ka o dejupụta fọm Locator maka ịbanye na Malta. Ngwa VeriFLY, dị na Google Play na Apple App Store, ga-enyere ndị ọrụ aka ịgbanye ngafe "Njem ha na Malta", nke na-agbakwụnye ihe achọrọ maka ịbanye na Malta, ahaziri n'ime ndepụta nyocha enyi na enyi, ka emechara nzere niile achọrọ. .
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Ihe Nganga Izu Nganga, gaa na:
Agwaetiti anwụ na-achasi ike nke Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi nke ihe nketa ewuru emebi nke ọma, gụnyere njupụta kachasị nke saịtị UNESCO World Heritage saịtị na obodo ọ bụla. Valletta nke ndị Knights dị mpako nke St. John wuru bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital of Culture maka 2018. Ọchịchị Malta na okwute sitere na ntọala ụlọ ochie kacha ochie na-akwụghị ụgwọ na ụwa, ruo n'otu n'ime ihe kachasị egwu nke Alaeze Ukwu Britain. sistemụ nchekwa, yana gụnyere ngwakọta bara ụba nke ihe owuwu ụlọ, okpukperechi na ndị agha site na mgbe ochie, etiti oge ochie na mmalite ọgbara ọhụrụ. Ebe ihu igwe na -achasi ike, ụsọ mmiri mara mma, ndụ abalị na -eme nke ọma, na afọ 7,000 nke akụkọ na -akpali mmasị, enwere nnukwu ihe ịhụ na ime. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa www.visitmalta.com.
Maka ozi ọzọ, gaa na: www.visitmalta.com, https://www.visitmalta.com/en/gay-friendly-malta